Maamulka gobolka Bari oo ka hadlay Weerar xalay ka dhacay Boosaaso | SAHAN ONLINE
Maamulka gobolka Bari oo ka hadlay Weerar xalay ka dhacay Boosaaso
BOOSAASO – Maamulka gobolka Bari iyo laamaha amniga gobolka ayaa ka hadlay weerar ay xalay magaalada ka geysteen koo hubaysan xalay sagaalkii fiidnimo bar kantarool oo kutaalla dhinaca koonfureed ee magaalada Boosaaso.
Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays(Dhado) ayaa ka hadlay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso,wuxuuna sheegay in laba qof dhinteen oo shacab ah halka saddex kamid ah ciidamada uu dhaawac soo gaaray.
Yuusuf Maxamed Wacays(Dhado) oo ka hadlayey maydadka saddex qof oo lasoo dhigay tuulada Karin oo qiyaastii u jirta 35 km degmada Qandala ayaa sheegay in saddexdaas qof ahaayeen askar ka tirsan ciidamada Daraawiishta Puntland.
Shirka jar’aaid inta uu socday ayaa lagu soo bandhigay agab uu maamulku sheegay in loo adeegsado qaraxyada oo ay ciidamadu soo qabteen iyo kabta nin kamid ahaa kooxdii weerarka soo qaaday oo goobta ka baxsaday.
Ugu danbeyn Taliyaha qeybta gobolka Bari Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa ugu baaqay bulshada iney la shaqeeyaan si wax looga qabto ammaanka magaalada Boosaaso,wuxuuse wax kama jiraan ku sheegay wararka sheegaya in aanooyin qabiil salku ku hayso amni-darada magaalada.